शिवजी संगको प्रत्यक्ष भेट - Patipauwa
बुधबार, २६ फागुन २०७७, १४ : ४५
हिजो राती शिवजी संग एकदमै गहन रुपमा छलफल भयो । आज भोलि दिनचर्या कस्तो छ भनि मलाई सोध्नु भयो । मैले मेरो ठिकै रहेको जानकारी दिए , उहाँको दिनचर्चाको बारेमा सोध्न मिल्ने हो कि नाई भन्ने कुरामा म केहि क्षण अलमल्ल भए। मन दर्हो गरेरै मैले उहाँको दिनचर्चाको बारेमा सोधे। उहाँले आफ्नो पनि ठिकै भएको जानकारी गराँउनु भो। शिवरात्रीको पुर्व सन्ध्यामा उहाँ प्रकट हुनुभएको कारणले गर्दा मैले यसपालिको शिवरात्रीको तयारीको बारेमा प्रश्न राख्न मन लाग्यो, यसपालिको शिवरात्री अलि फरक किसीमले मनाउने निर्णय लिएको बारे उहाँले बताउनु भयो । केहि बेर अलमल हुदै मैले फेरि प्रश्न गर्ने आट गरे र सोधे, फरक किसीम भन्नाले ? प्रसादहरु परिवर्तन गरि मनाउने भन्ने उहाँको जवाफ आयो ।
म अझ उत्साहित हुदै प्रश्न राखे , तपाईको प्रसाद त सबैलाई जानकारी नै छ । यसपालि किन परिवर्तन ? हो तपाई सहि भन्दै हुनुहुन्छ, धेरै पहिला देखि त्यहि प्रसादको चलन थियो, आज भोलि मनुष्यहरु प्रसादको नाममा गलत रुपमा प्रयोग गर्न थाले , मानिसहरुमा अस्वस्थ्कर खानपिन तथा गलत ब्यबहारका कारणले धेरै किसिमका समस्या तथा रोगहरु देखा पर्न थाले त्यसैले अब फलफुल दुध जस्ता फाईदाजनक खानेकुराको सेवन गरेर शिवरात्री मनाउनका लागि उहाँलेसबैलाई अनुरोध गरेको भन्ने जवाफ दिनु भयो । शिवजिका यस्ता उत्प्रेणा सहितका शब्दहरु सुनेर म अचम्मित हुनुका साथै भगवानको प्रत्यक्ष दर्शन पाएर अझ धरै प्रशन्न भए। मलाई यो पल धेरै आनन्द आईरहेको थियो। मलाई प्रतक्ष रुपमा शिवजी संग भेट्न पाँउदा धेरै आनन्द अनुभुति भैरहेको थियो।
मैले फेरी प्रश्न राखे, मैले भाङ्ग, धतुरो, धुमपान केहि सेवन गर्दिन तर मलाई नै हजुरले किन सम्झाउदै हुनुहुन्छ ?
उहाँमुसुमुसु हासेर जवाफ दिनुभयो।
मलाई सबैकुरा थाह हुन्छ । को कस्तो छ, कस्ले के गर्छ सबै थाहा हुन्छ । तपाईले सेवन गर्नुहुन्न मलाई थाहा छ । अझ तपाईले सकारात्मक ब्यबहार परिवर्तन तथा नसर्ने रोग रोकथाम सम्बन्धि अभियानमा जुट्नु भएको देखे । सो कार्यले धेरै जना ब्यक्तिको सकारात्मक ब्यबहार परिवर्तनका लागि उत्प्रेरणा मिल्छ त्यसैले म तपाई लाई यि सबै कुरा जानकारी गराउँदै छु भन्नुभयो । म धेरै प्रशन्न भए, मैले गरेको कार्यको शिवजिले मुल्याङ्कन गर्नुभएकोमा मलाई भित्र भित्रै एकदमै भारी अनुभव भैरहेको थियो।
त्यसपछि मलाई स्वस्थकर खानपिन र सकारात्मक ब्यबहार परिवर्तनको क्षेत्रमा अझ थप कार्य गर्ने प्रेरणा जाग्यो र थप कार्य गर्ने प्रतिबद्दता ब्यक्त गरे ।
यस्तो महत्वपुर्ण अवसर पाएकोमा एउटा फोटो खिचेर सामाजिक संजालमा रङ्ग्याउने ईच्छा प्रकट गर्दै मैले फोटो खिच्नका लागि आग्रह गरे, उहाँ कुनै संकोच बिना तयार हुनुभयो ।
उहाँसंग मेरो जिउ, रङ्ग, उचाई , तौल , भावना सबै कुरामा मेल खाने थिएनन तर पनि केहि बिचार मिलेर होला सायद त्यो क्षणलाई क्यामरामा कैद गर्नका लागि तयार हुनुभयो।
दुई चार वटा सेल्फी खिचेर उँहा बिदा हुनु भयो । म त्यो महत्वपुर्ण क्षणको फोटोहरुलाई धेरै बेर सम्म मेरा नयनहरुमा स्पर्ष गरे र केहि उत्प्रेरणाका शब्द सहित सामाजिक संजालमा रङ्ग्याउने निधो गरे ।
मनमा धेरै खाले कुराहरु खेल्दै थिए, कति लाईक आउला, के कस्ता कमेण्टहरु आउलान, मेरो यो तस्विर तथा शब्दले साचिकै मानिसको सकारात्मक ब्यबहार परिवर्तन गराउला त ? के शिवजि संग मेरो प्रत्यक्ष भेट भएको कुरा सबैले बिश्वास गर्लान त ? म आफै संग यि सब कुराका जवाफ थिएन तर पनि एउटा कुरामा बिश्वास चाँहि थियो कि शिवजि संगको तस्विरले पक्कै पनि मानिसले बिश्वास गर्नेछन र उहाँका ति महत्वपुर्ण भनाईले सकारात्मक ब्यबहार परिवर्तनका लागि उत्प्रेणा भने अवस्य मिल्नेछ ।
यि सबै कुराले मानिसमा नकारात्मक बानी ब्यबहारहरु परिवर्तन हुने ठुलो आशा साथ मनमा कुरा खेल्दै थिए, एक्कासी केहि उज्यालोले आँखा खोल्न गार्हो भएको महशुस भयो, केहि बल प्रयोग गरेर आँखा खोलेर हेरेको त झ्यालबाट घाम भित्र छिरेको रैछ । सुर्य उदायको पनि केहि बेर भैसकेको रहेछ । म हतार हतार बिस्ताराबाट उठेर मोबाईल खोलेर लाईक र कमेण्टहरुको गिन्ती गर्न थाले तर मोबाईलमा न त कुनै लाईकहरु थिए न त कुनै कमेण्टहरु नै, फेरि मैले मोबाईलको ग्यालरीमा गई उक्त तश्बिर खोज्न थाले तर कतै भेटिएन । मलाई एकदमै अफ्ठारो महशुष भयो, त्यस्तो अकल्पनीय, अविस्मरणीय तथा महत्पुर्ण क्षणको तश्विर मेरो क्यामरामा कैद हुन सकेनछ, । तरपनि क्यामरामा कैद नभए पनि मेरो यो मनसपटलमा सधै कैद भै रहनेछ भन्दै म आफैलाई सान्त्वना दिईराखे ।
यि सबै कुराहरु त राती निद्राका बेला सपनामा भएका गतिबिधीका क्षण रहेनछन । सपनानै भएपनि ति क्षणहरु एकदमै अबिस्मरणिय थिए, शिवजी संगको भेट, उहाँले ब्यक्त गरेका अभिब्यक्तिहरु तथा मलाई प्रदान गर्नुभएका उत्प्रेरणाहरुले मेरो ब्यक्तिगत जिवनमा धेरै ठुलो प्रभाव पार्ने छ र तपाईहरुले पनि आफ्नो जिवनमा अनुसरण गर्दै निरोगी बनि स्वस्थ समाज निर्माणमा सम्पुर्णको भुमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्दै शिवरात्री लगायत सम्पुर्ण चाडपर्वहरुमा सभ्य बनि असल ब्यबहार प्रदर्शन गरि स्वस्थकर खानपिनको प्रयोग गरि भब्यताका साथ मनाऔ।